Master ọdịnaya na ụdị na gị ihe odide
Edere site Tranquillus | Mar 22, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
N'etiti ọdịnaya na ọdịdị, ọtụtụ mmadụ na-ekpebi ịkwado otu ma ọ bụ nke ọzọ. N'eziokwu, ị nweghị okomoko ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na ọkachamara. Dika ihe edere na-egosi ikike gi, otu a na-eme ka a mata ihe di mkpa na nkwanye ugwu ị nwere maka ndị na-agụ akwụkwọ gị. Yabụ, ị ga-eburu n'uche ọtụtụ mpaghara nke na-eme ka o kwe omume iweta ihe ederede impeccable na nke ahụ na-eme ka ịchọọ ịgụ.
Mmasị mbụ ọhụụ
Ahazi ọkachamara ọkachamara, na ọbụna onye na-amu amu, ka edepụtara iji hụ ụdị ahụ nke mbụ tupu ị banye na ala. Ya mere, o nwere mpiaji a iji rụọ ọrụ nlele site n'elu ruo ala na site n'aka ekpe gaa n'aka nri. Na sekọnd ole na ole, onye na-agụ ya nwere ekele maka ọdịdị nke ederede. Agaghị enwe ike gbanwee nyocha a ọbụlagodi na ogo dị na ndabere dị. Nke a na-akọwa mkpa nhazi ahụ, iji ụfọdụ okwu, ntinye ihe oyiyi, wdg. Nke a na-akọwakwa ọnọdụ nke aha ahụ n’elu na nhazi nke isiokwu nta niile dị n’akụkụ aka ekpe nke ibe ahụ.
Ojiji nke abụba na abụba
Ojiji nke abụba na abụba na-agbaso mgbagha nke ike. N'ezie, anya na-adọta anya site na ihe ọ bụla nwere ike karịrị ike ya, nke mere na anyị na-etinye nnukwu ma ọ bụ obi ike ihe ndị anyị chọrọ ịdọrọ uche. N'ihe banyere odide ederede, nke a bụ okwu nke isiokwu na isiokwu ndị dị n'ụdị buru ibu na mmeghe na mmechi nke ji obi ike. Enwere aghụghọ nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-eji na nhazi okwu, nke ahụ bụ iji ederede dị iche, nke akpọpụtara maka aha na isiokwu nta.
Ndị ọcha na-ezo aka na nchịkọta ederede nke na-enye ozi gbasara ọdịiche ha na ike. Ndị a bụ nkwụsịtụ akara, nkwụsị peeji, oghere. Nke a bụ ihe na-eme ka akwụkwọ ahụ nwee ume ma na-arụ ọrụ n'echiche nke onye na-agụ ya banyere akwụkwọ ahụ. N'ihi ya egosiri ịwụfu otu akara site n'itinye isi na-enweghị ịba ụba font nke ukwuu kama ịme mmụba a kama ịhapụ ya agbachi n'etiti ederede.
Ojiji nke usoro ndozi ala
Ederede gị abụghị ọrụ nka ka ị ghara ịkpa arụ gbasara usoro nchịkwa. Ọ ga-adị ka ihe nkiri nwere ọtụtụ mmetụta pụrụ iche. N’ikpeazụ ọ dịghị onye ji ya akpọrọ ihe. Yabụ, ị ga-ahọrọ idozi ma zere iji ọtụtụ ụdị dị iche iche. Ihe dị mma ga-abụ otu ma ọ bụ ụzọ abụọ.
Na mgbakwunye, ekwesiri ighota na ntinye nke onyonyo nwere ike buru nnukwu uru agbakwunyere maka ederede ma oburu na emechara ya nke oma. Ma ọ bụghị ya, a na-enweta mmetụta na-abụghị nke ya. Nke a bụ ihe mere ị ga-eji chọpụta mkpa nke ihe oyiyi ahụ ma jiri ụdị agba dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
N’ikpeazụ, iwu ndị a niile ga - ejikọrịrị ọnụ n’amamịghe ma dabara adaba n’ihi na ọ bụrụ n ’ịchọrọ itinye ọkụ na ọtụtụ ihe n’otu oge, ihe niile ga - adị njọ Ya mere, a manyere gị ime nhọrọ.
Master ọdịnaya na ụdị na gị ihe odide Machị 22nd, 2021Tranquillus
gara agaIsmchụpụ na ọnọdụ obi ọjọọ: onye ọrụ gị ọ ga-azọrọ emebi ọ bụrụgodi na ezighi ezi kpatara ya?
-esonụTeleworking: edinam atụmatụ nke ndị isi na-ewusi ịdị irè nke arịrịọ ya
Ihe nlele Email iji gosi na enwegh
Mara koodu ojiji na ọnọdụ ọkachamara